ရနျကုနျက မန်တလေးထကျ အသုံးစရိတျတှေ ပိုမိုသုံးစှဲပမေယျ့လညျး မွို့ပွဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုကို နှိုငျးယှဉျရငျ လုံးဝကှာခွားနေ – Voice of Myanmar
ရနျကုနျက မန်တလေးထကျ အသုံးစရိတျတှေ ပိုမိုသုံးစှဲပမေယျ့လညျး မွို့ပွဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုကို နှိုငျးယှဉျရငျ လုံးဝကှာခွားနတေယျလို့ တပျမတျောသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဗိုလျမှုးကြျောမငျးထှနျးကပွောပါတယျ။
ဒီကနပွေု့လုပျတဲ့ ပွညျထောငျစုလှတျတျောအစညျးအဝေးမှာ ရနျကုနျမွို့တျောရဖေူလုံ ရေးစီမံကိနျး အကောငျအထညျဖျောဆောငျရှကျဖို့အတှကျ အာရှဖှံ့ဖွိုးရေးဘဏျ(ADB)က အမရေိကနျဒျေါလာ သနျး ၁၈၀ ခြေးယူရေးကိစ်စနဲ့ စပျလြှဉျးဆှေးနှေးခြိနျမှာ ပွောဆိုလိုကျတာဖွဈပါတယျ။
“၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှဈ ဘဏ်ဍာရေးနှဈ တိုငျးဒသေကွီးနဲ့ ပွညျနယျအသုံးစရိတျလြာထားခကျြမှာ ရနျကုနျ တိုငျးအတှကျလြာထားငှေ ကပျြသနျးပေါငျး ၉၂၀ ဘီလီယံ၊ မန်တလေးတိုငျးအတှကျ အသုံးစရိတျလြာထားခကျြက ၄၂၂ ဘီလီယံဖွဈတဲ့အတှကျ ရနျကုနျတိုငျးက တိုငျးဒသေကွီးနဲ့ ပွညျနယျ စုစုပေါငျးသုံးငှရေဲ့ ၂၄ ရာခိုငျနှုနျးသုံးစှဲမှာဖွဈပွီး မန်တလေးတိုငျးက ၁၁.၅ ရာခိုငျနှုနျးသာ သုံးစှဲမှာဖွဈကွောငျး လလေ့ာတှရှေိ့ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ရနျ ကုနျနဲ့ မန်တလေး မွို့ပွဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုကို နှိုငျးယှဉျကွညျ့ရငျ လုံးဝကှာခွားနတောကို တှရေ့ပါတယျ”လို့ ဗိုလျမှုးကြျောမငျးထှနျးကပွောပါတယျ။
၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ်ဍာရေးနှဈ အစိုးရရဲ့ ကွှေးမွီဆိုငျရာ နှဈပတျလညျအစီရငျခံစာအရ ပွညျပခြေးငှေ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂၀.၀၀၁ ဘီလီယံ ခြေးယူထားပွီး အဲ့ဒီခြေးငှတှေထေဲက ရနျကုနျမွို့တျောစညျပငျသာယာရေးကျောမတီက အမရေိကနျဒျေါလာ ၅၄၇.၄၃၁ သနျး၊ စုစုပေါငျး ခြေးငှရေဲ့ ၂.၇၃ ရာခိုငျနှုနျး၊ မန်တလေးမွို့တျော စညျပငျသာယာရေးကျောမတီကတော့ အမရေိကနျဒျေါလာ ၁၀၃. ၅၅၆ သနျး၊ စုစုပေါငျးခြေးငှရေဲ့ ဝ.၅၂ ရာခိုငျနှုနျး ရယူသုံးစှဲထားတာကို သိရတယျလို့ ဆှေးနှေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
“နှိုငျးယှဉျကွညျ့ရငျ ခြေးငှအေနနေဲ့ ရနျကုနျမွို့တျောစညျပငျသာယာရေးကျောမတီက ပိုမြားတာတှရှေိ့ရပါတယျ။ ခြေးငှတှေမြေားပွီး ဘယျနှဈခုအကောငျအထညျဖျောပွီးပွီလဲ ပွနျလညျစဉျးစားသငျ့ပါတယျ။ မွို့တျောစညျပငျကလညျး အရှုံးပျေါနတောကို ကွားသိရပါတယျ။ ရနျကုနျနဲ့ လူဦးရမေတိမျးမယိမျးပဲရှိတဲ့ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီးအစိုးရအဖှဲ့ ဆောငျရှကျမှုကို ယှဉျကွညျ့ လိုကျရငျ ခြေးယူတဲ့ပမာဏက ဒျေါလာသနျးတဈရာပဲရှိပမေယျ့ အကောငျအထညျဖျောနိုငျမှုကွောငျ့ ပွညျသူတှေ ကနြေပျမှုရှိတဲ့အပွငျ စာရငျးစဈခြုပျအစီရငျခံစာနဲ့ ပကျသကျပွီးတော့လညျး ဘယျလိုပွဿနာမြိုးမှ မရှိဘူးလို့ တှရေ့ပါတယျ”လို့ ဗိုလျမှုးကြျောမငျးထှနျးက သုံးသပျဆှေးနှေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အထကျပါ အာရှဖှံ့ဖွိုးရေးဘဏျ (ADB)ကနေ အမရေိကနျဒျေါလာ သနျး ၁၈၀ ခြေးယူပွီး ရပေေးဝေ ရေးစီမံကိနျးတှကေို ဆောငျရှကျဖွဈရငျ ခြေးငှကေို ပွနျဆပျရမယျ့အတိုးက အကွမျးအားဖွငျ့ ဆိုငျငံ့ကာလအတှငျးမှာ တဈနှဈကို အမရေိကနျဒျေါလာ ၁.၈ သနျးခနျ့နဲ့ ပွနျဆပျကာလအတှငျး တဈနှဈကို အရငျးနဲ့အတိုးပေါငျး အမရေိကနျဒျေါလာ ၁၀.၁ သနျးခနျ့ နှဈစဉျ ပွနျလညျပေးဆပျရမှာဖွဈတာကို တှရေ့တယျလို့ပွောပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ဖွဈနိုငျပါ့မလားဆိုတာကို ပွနျလညျတှကျခကျြ ပွီးမှသာ စီမံကိနျးဆောငျရှကျ သငျ့၊ မသငျ့ ရှငျးလငျးဆှေးနှေးပေးစလေိုတယျလို့ ပွောပါတယျ။
ရနျကုနျမွို့တျော၊ စညျပငျသာယာရေးကျောမတီနဲ့ ပကျသကျပွီး ပွညျပကွှေးမွီအခွအေနတှေနေဲ့ အ ကောငျအထညျဖျောတဲ့အပိုငျးကို လလေ့ာကွညျ့ရာမှာ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ မတျလကုနျအထိ အမရေိကနျဒျေါလာ သနျး ၁၂၀၀ထိ ရယူထားပွီး လကျရှိ ခြေးငှနေဲ့ဆိုရငျ သနျး ၁၃၀၀ ကြျောအထိ ရှိလာတော့မှာဖွဈပါတယျ။
ခြေးငှတှေေ အကောငျအထညျဖျောတဲ့အပိုငျးကို ကွညျ့မယျဆိုရငျ မူလခြေးငှေ အမရေိကနျဒျေါလာ သနျး ၁၂၀၀ထဲက အမရေိကနျဒျေါလာ ၁၁၈ သနျးကိုသာ သုံးစှဲထားတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ရာခိုငျနှုနျးအားဖွငျ့ ၉.၈ ရာခိုငျနှုနျးသာ အကောငျအထညျဖျောနိုငျတာကို တှရေ့ပါတယျ။
ကနျြတဲ့ခြေးငှတှေေ ဘာကွောငျ့အကောငျအထညျမဖျောနိုငျရတာလဲဆိုတာ စီမံကိနျးတဈခုခငျြးဆီအလိုကျ အသေးစိပျရှငျးပွပေးစလေိုပါတယျလို့လညျး ပွညျထောငျစုလှတျတျောကို တငျပွဆှေးနှေးခဲ့ပါတယျ။
အဆိုပါ ခြေးငှရေယူရေးကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး ဆကျလကျဆှေးနှေးဖို့ကနျြရှိနတေဲ့ လှတျတျောကိုယျစား လှယျတှအေနနေဲ့ လာမယျ့ ၂၄ ရကျနမှေ့ာပွုလုပျမယျ့ ပွညျထောငျစုလှတျတျောအစညျးအဝေးမှာ ဆကျလကျဆှေးနှေးခှငျ့ပွုဖို့ လြာထားတယျလို့ ပွညျထောငျစုလှတျတျောနာယကဦးတီခှနျမွတျက လှတျတျောကိုကွငွောခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ရန်ကုန်က မန္တလေးထက် အသုံးစရိတ်တွေ ပိုမိုသုံးစွဲပေမယ့်လည်း မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို နှိုင်းယှဉ်ရင် လုံးဝကွာခြားနေ
ရန်ကုန်က မန္တလေးထက် အသုံးစရိတ်တွေ ပိုမိုသုံးစွဲပေမယ့်လည်း မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို နှိုင်းယှဉ်ရင် လုံးဝကွာခြားနေတယ်လို့ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှုးကျော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်။
ဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ ရန်ကုန်မြို့တော်ရေဖူလုံ ရေးစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်(ADB)က အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၈၀ ချေးယူရေးကိစ္စနဲ့ စပ်လျှဉ်းဆွေးနွေးချိန်မှာ ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
“၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်အသုံးစရိတ်လျာထားချက်မှာ ရန်ကုန် တိုင်းအတွက်လျာထားငွေ ကျပ်သန်းပေါင်း ၉၂၀ ဘီလီယံ၊ မန္တလေးတိုင်းအတွက် အသုံးစရိတ်လျာထားချက်က ၄၂၂ ဘီလီယံဖြစ်တဲ့အတွက် ရန်ကုန်တိုင်းက တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ် စုစုပေါင်းသုံးငွေရဲ့ ၂၄ ရာခိုင်နှုန်းသုံးစွဲမှာဖြစ်ပြီး မန္တလေးတိုင်းက ၁၁.၅ ရာခိုင်နှုန်းသာ သုံးစွဲမှာဖြစ်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရန် ကုန်နဲ့ မန္တလေး မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် လုံးဝကွာခြားနေတာကို တွေ့ရပါတယ်”လို့ ဗိုလ်မှုးကျော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်။
၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အစိုးရရဲ့ ကြွေးမြီဆိုင်ရာ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာအရ ပြည်ပချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀.၀၀၁ ဘီလီယံ ချေးယူထားပြီး အဲ့ဒီချေးငွေတွေထဲက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၄၇.၄၃၁ သန်း၊ စုစုပေါင်း ချေးငွေရဲ့ ၂.၇၃ ရာခိုင်နှုန်း၊ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီကတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၃. ၅၅၆ သန်း၊ စုစုပေါင်းချေးငွေရဲ့ ၀.၅၂ ရာခိုင်နှုန်း ရယူသုံးစွဲထားတာကို သိရတယ်လို့ ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
“နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် ချေးငွေအနေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက ပိုများတာတွေ့ရှိရပါတယ်။ ချေးငွေတွေများပြီး ဘယ်နှစ်ခုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးပြီလဲ ပြန်လည်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ မြို့တော်စည်ပင်ကလည်း အရှုံးပေါ်နေတာကို ကြားသိရပါတယ်။ ရန်ကုန်နဲ့ လူဦးရေမတိမ်းမယိမ်းပဲရှိတဲ့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဆောင်ရွက်မှုကို ယှဉ်ကြည့် လိုက်ရင် ချေးယူတဲ့ပမာဏက ဒေါ်လာသန်းတစ်ရာပဲရှိပေမယ့် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှုကြောင့် ပြည်သူတွေ ကျေနပ်မှုရှိတဲ့အပြင် စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာနဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့လည်း ဘယ်လိုပြဿနာမျိုးမှ မရှိဘူးလို့ တွေ့ရပါတယ်”လို့ ဗိုလ်မှုးကျော်မင်းထွန်းက သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB)ကနေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၈၀ ချေးယူပြီး ရေပေးဝေ ရေးစီမံကိန်းတွေကို ဆောင်ရွက်ဖြစ်ရင် ချေးငွေကို ပြန်ဆပ်ရမယ့်အတိုးက အကြမ်းအားဖြင့် ဆိုင်ငံ့ကာလအတွင်းမှာ တစ်နှစ်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၈ သန်းခန့်နဲ့ ပြန်ဆပ်ကာလအတွင်း တစ်နှစ်ကို အရင်းနဲ့အတိုးပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀.၁ သန်းခန့် နှစ်စဉ် ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမှာဖြစ်တာကို တွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို ပြန်လည်တွက်ချက် ပြီးမှသာ စီမံကိန်းဆောင်ရွက် သင့်၊ မသင့် ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပေးစေလိုတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့တော်၊ စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပြည်ပကြွေးမြီအခြေအနေတွေနဲ့ အ ကောင်အထည်ဖော်တဲ့အပိုင်းကို လေ့လာကြည့်ရာမှာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လကုန်အထိ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၂၀၀ထိ ရယူထားပြီး လက်ရှိ ချေးငွေနဲ့ဆိုရင် သန်း ၁၃၀၀ ကျော်အထိ ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ချေးငွေတွေ အကောင်အထည်ဖော်တဲ့အပိုင်းကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် မူလချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၂၀၀ထဲက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁၈ သန်းကိုသာ သုံးစွဲထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၉.၈ ရာခိုင်နှုန်းသာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
ကျန်တဲ့ချေးငွေတွေ ဘာကြောင့်အကောင်အထည်မဖော်နိုင်ရတာလဲဆိုတာ စီမံကိန်းတစ်ခုချင်းဆီအလိုက် အသေးစိပ်ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ်လို့လည်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ချေးငွေရယူရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့ကျန်ရှိနေတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်တွေအနေနဲ့ လာမယ့် ၂၄ ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မယ့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ ဆက်လက်ဆွေးနွေးခွင့်ပြုဖို့ လျာထားတယ်လို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကဦးတီခွန်မြတ်က လွှတ်တော်ကိုကြေငြာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။